Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Talyaaniga Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta oo leh naaneyska “Mimmo”. Sheekadeena Carruurnimada Domenico Berardi oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo koritaanka Domenico Berardi. Dhibcaha Sawirka: Sportmirtese, Castrumcropalatum iyo Cayaaraha
Haa, qof walbaa wuu ogyahay kartidiisa iyo isha uu higsanayo. Si kastaba ha noqotee dad yar ayaa tixgeliya Domenico Berardi's Biography oo ah arrin aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Domenico Berardi wuxuu ku dhashay maalinta 1st ee bishii Agoosto 1994 at Karoati, magaalo ku taal gobolka Cosenza ee gobolka Calabria ee koonfurta Talyaaniga. Waa kii ugu yaraa saddex carruur ah oo u dhashay hooyadiis, Maria iyo aabihiis, Luigi.
Domenico Berardi wuxuu u dhashay waalid aan waxbadan laga aqoonin. Astaanta Muuqaalka: PxHere iyo Sportmirtese.
Muwaadin Talyaani ah oo dhalasho cad leh una leh xidid aad u yar oo caan ah ayaa lagu soo barbaaray magaalada Bocchigliero ee gobolka Cosenza ee dalka Talyaaniga halkaas oo uu kula soo koray walaalkiis ka weyn, Francesco iyo walaasheed, Severina.
Domenico Berardi wuxuu ku soo barbaaray Bocchigliero ee gobolka Cosenza. Astaanta Sawirka: WorldAtlas iyo Sportmirtese.
Markii uu ku barbaaray magaalada, Berardi ma uusan ka cudurdaarin cudur daar taas oo u oggolaaneysa isaga fursad uu kula ciyaaro saaxiibadiisa ku dhawaad ​​maalin kasta oo ka mid ah usbuuca. Mararka qaar wuxuu iska dhigaa inuu qabo calool xanuun si uu iskuulka uga baxsado uguna raaxeysto ciyaarista isboorti.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Thanks to wuxuu ku dhashay qoys jecel kubada cagta, Young Berardi wuxuu ka diiwaangashanaa iskuulka kubada cagta ee Castello ee Mirto - hamlet oo ka tirsan Crosia, sidoo kale wuxuu ku qaatay gobolka Cosenza, Italy - halkaas oo uu ka qaaday tallaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay ee kubbadda cagta tartan.
Domenico Berardi wuxuu qaaday talaabadiisi ugu horeysay ee tartan kubada cagta ah oo ka dhacay iskuulka kubada cagta ee Castello. Sawirka Sawirka: Sportmirtese iyo TUON.
Intii uu ku tababaranayay Dugsiga, Berardi wuxuu bartay oo soo bandhigay tabo xirfadeed oo muujinaya qaabkiisa gooldhalinta ee aadka u wanaagsan ee iman doona. Sidaas darteed, tababarihiisu badanaa wuxuu u xilsaaray xubnaha kooxda inay kubadsadaan isaga si ay u hubiyaan goolal la hubo.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Waqtigii uu Berardi da 'ahaan jiray 13 ee 2008, wuxuu macsalaameeyay saaxiibadiisa ku sugan Mirto si uu ugu qoro akadeemiyada kubbadda cagta ee Cosenza halkaas oo uu ku qaadan doono muddada ugu yar ee meheradda dhallinyaranimadiisa (2008 – 2010).
Domenico Berardi wuxuu qaatay kaarka aqoonsiga kubada cagta kahor inta uusan ku soo biirin Cosenza. Astaanta Sawirka: Sportmirtese.
Toddobaad aad u xun, Berardi wuxuu booqday xerada jaamacadda walaalkiis ka weyn ee Francesco ee Bodena. Intii uu ku sugnaa xerada kambaska, waxa uu ku lug yeeshay ciyaar shan-dhinac ah ah oo uu la yeeshay walaalkiis iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada jaamacadda. Iyaga oo aan ka warqabin Berardi, waxaa jiray indha indheeyaal ka socda Sassuolo kulamadii kuwaas oo xusuusiyay kartidiisa cayriin.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Sidaa darteed, 16-sano jir ah Berardi ayaa loo keenay Sassuolo halkaas oo uu kaga soo kacay safka. Berardi ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay kooxda koowaad ee 27th of August 2012 intii lagu jiray kulankii Serie B ee ay la ciyaareen Cesena wuxuuna sii waday inuu ka caawiyo kooxdiisa inay ku guuleysato Horyaalka Serie A.
In kasta oo Berardi kor u qaadida darajooyinka laga yaabo inuu dad badan dhaqso u laalo, hadana go'aan la'aan ma ahayn. Kubbad sameeyaha sida xawliga ah ku socda ayaa kooxo badan oo Yurub ah ka doonayay saxiixiisa. Si kastaba ha noqotee, wuxuu u tixgeliyey inuu yahay mid aan qaan gaarin oo doortay inuu dhammaystiro hannaanka koriinka ee Sassuolo.
Domenico Berardi wuxuu go’aansaday inuu kusii nagaado Sassuolo inkasta oo uu soo jiitay kooxo waa weyn qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa. Dhibcaha Sawirka: Castrumcropalatum.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Sare u qaado sheekada
Sanadihii dambe (2013 - 2015) Domenico wuxuu cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah dhalinyarada kubada cagta ee aadka u yaqiineysa Italy wuxuuna ku guuleystay abaalmarino shaqsiyadeed oo dhowr ah oo ay ku jiraan abaalmarinta 2015 Bravo ee abaalmarinta ugu fiican kubada cagta yurub.
Maxaa intaa ka badan? wuxuu ahaa saddex jeer ku taxan inuu ka mid yahay ciyaartoy da 'yarta ah ee adduunka ugu sarreeya ee Don Balón ee ku yaal 100, 2013 iyo 2014. Si dhakhso leh waqtiga qorista, Berardi waa gooldhaliyaha ugu sareeya Sassuolo waana xidig si weyn loo baadi goobayo kaasoo xiiseynaya kooxaha Roma, Tottenham iyo Liverpool. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Domenico Berardi waa gooldhaliyaha ugu sareeya Sassuolo waqtiga qorista. Astaanta Sawirka: BleacherReport.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyinka nolosha qofka
U dhaqaaqida arrimaha ku saabsan nolosha jaceylka ee Domenico Berardi, immisa magac ayaa qof ka heli kara buugiisa taariikhda shukaansiga iyo muxuu yahay xiriirkiisa xaadirnimo waqtiga la qorayo taariikh nololeedkan?
Markii hore, Berardi lama yaqaan inuu taariikh u qabtay haweeney ka hor intuusan la kulmin saaxiibtiis inuu is-beddelay (xaaskiisa ay noqoto) - Francesca Fantuzzi. Francesca ayaa markii ugu horeysay aragtay Berardi intii lagu guda jiray ciyaar dhalinyaro ah, ka dibna wuxuu kula xiriiray Facebook. Waligood lama kala tagin waligood waxaana laga yaabaa inay soo dhoweeyaan wiilasha (gabdhaha) ama gabdhahooda waqti kasta waqti dhow.
Domenico Berardi ayaa sawir gacmeed ku qaaday saaxiibkiisa Francesca Fantuzzi. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyinka Nolosha Qoyska
Domenico Berardi waxay ka timid asal qoys dabaqadda dhexe ah. Waxaan soo koobeynaa xaqiiqooyinka ku saabsan noloshiisa qoys.
Ku saabsan Domenico Berardi aabihiis: Luigi waa aabihii Berardi. Luigi wuxuu caan ka ahaa Inter Milan ka hor inta uusan dhashay Berardi. Si kastaba ha noqotee, wuxuu boos jilicsan u leeyahay Sassuolo oo uu wiilkiisu u ciyaaro. Aabaha seddex jirka ah ee taageeraya wuxuu caawiyay joogteynta jaceylka Berardi uu u qabo kubada cagta wuxuuna sii wadaa inuu sii wado taageerada ilaa iyo maanta.
Ku saabsan Domenico Berardi hooyadiis: Maria waa hooyadeed Berardi. Waa haweeney guri-joog ah oo ka caawisay barbaarinta Berardi iyo walaalihiis. Hooyada taageerada leh ee saddexda ah waxay sidoo kale dan ka leedahay kubada cagta. Xaqiiqdii, waxay taageere u tahay kooxda Juventus iyo dabcan, naadiga ugu yar ee carruurtooda - Sassuolo.
Domenico Berardi waxaa soo korsaday waalid aan waxbadan laga aqoonin. Dhibcaha Sawirka: ClipArtStudio iyo TransferMarket.
Ku saabsan Walaalaha Domenico Berardi: Berardi wuxuu leeyahay laba walaalo ah oo waaween. Waxay ka mid yihiin walaalkiis Francesco iyo walaashiis Severina. In kasta oo aan wax badan laga ogayn walaalaha, haddana maahan shakhsiyaad isboorti oo xirfad u leh sida Berardi. Si kastaba ha noqotee, labaduba waxay jecel yihiin kubbadda cagta waxayna ciyaarta ku raacaan si xamaasad leh.
Ku saabsan ehelka Domenico Berardi: Marka laga tago qoyska dhow ee Berardi, wax badan lagama oga waxa ku saabsan hooyada iyo ayeeyada awoowe halka adeerkeed, abtiyaashiis, adeerkiis, abtiyaashiis iyo abtiyaashiis aan weli loo aqoonsan.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Ka hadal shakhsiyadda Berardi, wuxuu leeyahay shakhsi cajiib ah oo ka tarjumaya dabeecadda nololeed ee shakhsiyaadka uu hagayo Leo Zodiac Sign. Intaas waxaa sii dheer, isagu waa isu dheelitiran, dareen leh oo dhab ah xagga dhulka.
Kubadsameeyaha oo si dhexdhexaad ah u muujiya macluumaad ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo tan gaar ahaaneedba, wuxuu leeyahay dano iyo hiwaayado ay ka mid yihiin tartamada F1, safarka, dabaasha, ciyaarista fiidiyowga, dhageysiga muusikada iyo waqti qaali ah la qaataan qoyska iyo saaxiibbada.
Domenico Berardi waxay dano ka leedahay tartanka F1. Ma arki kartaa Charles Leclerc sawirka? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Marka loo eego sida uu Berardi u sameysto una adeegsado lacagta, qiimahiisa saafiga ah ayaa wali dib loo eegayaa waqtiga qorista halka qiimihiisa suuqgu uu taagan yahay $ 20 milyan. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin Berardi maalkiisa yar ee la yaqaan ayaa ka socda heshiiskiisa Mushaharka iyo oggolaanshaha.
In kasta oo kubadsameeyuhu aanu ku degdegin inuu ku muujiyo maalkiisa isagoo muujinaya baabuurtiisa qaaliga ah iyo guryaha, wuxuu si weyn ugu safri karaa safarro qaali ah oo uu kula kulmo saaxiibadiisa.
Domenico Berardi wuxuu waqti fiican ku qaatay goob qaali ah saaxiibkiis Marco Benassi. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Sheeko carruurnimadiisii ​​iyo taariikh nololeedkiisii ​​Domenico Berardi iyo taariikh nololeedkiisa ayaa si fiican u soo koobeysa xaqiiqadan yar ama ka yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Diinta: Domenico Berardi kuma weynayn diinta halka ay jiraan wax tilmaamaya oo tilmaamaya waxa uu rumeysan yahay waqtiga qorista. Sidaa darteed looma gunaanadayn karo in uu rumaysto iyo in kale.
Tattoos: Berardi wuxuu u arkaa fanka jirka inuu yahay mid lagama maarmaan u ah muuqaalkiisa quruxda badan. Sidaa darteed, wuxuu ku leeyahay hal tattoo weyn oo gacanta bidix ah. Tattoo wuxuu soo bandhigayaa lambarka funaanadaha Berardi ee 25 isagoo leh xiddig leh ubaxyo. Sawirka hoostiisa ayaa ah aalad-sida suunka oo kale oo leh xargaha.
Domenico Berardi Tattoo horumarka. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Sigaar cabidda iyo cabbitaanka: Domenico Berardi lama yaqaan inuu sigaar cabbo waqtiga qorista. Sababaha nolosha noocan oo kale ah ayaa xuduuda u saaran iyada oo xaqiiqda ah in aqoonyahannada kubbadda cagta aysan iloobin faa'iidooyinka ka imanaya ku noolaanshaha qaab nololeed caafimaad leh.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriska sheekadeena Carruurnimada Domenico Berardi oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.